Ingabe kukhona ukuxhumana phakathi kokuziphatha kwenyanga nobuhlobo bomthando? Ababhula ngezinkanyezi bathi kukhona. Ake sizame ukunquma ukuthi yiziphi izinsuku okufanele sizisebenze ngazo, futhi yiziphi izinsuku - ukungenzi lutho, ekukhulumisaneni namadoda.
Akuyona imfihlo kunoma ubani ukuthi ukuziphatha kweNyanga kuhlobene eduze nezinqubo ezihlukahlukene ezenzeka emhlabeni wethu. I-satellite yokufakelwa yomhlaba inomthelela oqondile emsebenzini obalulekile nenhlalakahle yomuntu. Enye yalezi zindawo, njengoba enye izazi zezinkanyezi zisho, ubuhlobo phakathi kwabesilisa nabesifazane. Futhi yingakho, izazi zezinkanyezi zicelwa ukuba zicabangele ukuziphatha kwenyanga ekwakheni ubudlelwano obuhlukahlukene, ukuze izifiso zethu nezifiso zethu zihambisane nomthelela wenyanga wezidakamizwa zabantu.
Abantu abaningi baye bazwa ukuthi kunemibono enjalo ngokubhula ngezinkanyezi njengenyanga, inyanga yenyanga, njalonjalo. Yini engenziwa ukuze ama-biorhythms omuntu ahambisane nama-biorhythms enyangeni. Ngakho, inyanga yenyanga ihlukaniswe ngezigaba ezine: inyanga entsha, inyanga egcwele, isigaba sezinyanga ezikhulayo kanye nenyanga eguquguqukayo. Lapho kufika inyanga entsha, kungcono ukwenqaba ukwenza izinqumo ezibalulekile nokwakha noma yimaphi amacebo empilweni yakho. Kodwa inyanga yonke iphikisana nesikhathi, ukukhaphela okuphelele kwemizwa yothando. Kodwa-ke, umuntu kufanele aqaphele, ngoba phakathi nenyanga egcwele ukuthi inyanga ithonya abantu abajwayele ukuzwela ngokweqile. Ngakho-ke, ngezikhathi ezinjalo, ukuhlaselwa kungase kwenzeke, ukukhathazeka nokukhathazeka kuyokwanda nganoma yisiphi isizathu. Zama ezinsukwini ezincane ukuxhumana nomunye.
Inyanga ekhulayo inomphumela omuhle ekuqaleni kwezindaba ezintsha, inyanga esekhulile ibonisa ukuthi yisikhathi sokunciphisa umsebenzi wakho futhi ungathathi lutho olufisa ukuthanda.
Ngaphezu kwakho konke okushiwo ngenhla, ungasebenzisa ngokunenzuzo uhlu lwezinsuku ezimnandi ongathuthukisa ngazo ubuhlobo bakho futhi wazi ukuthi konke kuzovela.
Ngosuku lokuqala lwenyanga kungcono kakhulu ukuphupha mayelana nabathandekayo bakho noma abathandekayo. Phela, lolu suku, kusukela ezikhathini zasendulo, luyathandeka futhi konke okubonayo kufanele kube yindlela enhle kunazo zonke yokugcwaliseka.
Usuku lwesibili lwenyanga kufanele lushiywe ukuthuthukisa intuition yakho. Kulezi zinsuku ukuthi kufinyelela ekugcineni kwayo. Ukulalelisisa abantu, ikakhulu lokhu kusebenza kobulili obuhlukile, futhi ulalele izwi lakho elingaphakathi. Mhlawumbe kuzoba ngumsizi wakho ngalolu suku futhi uzokhomba lowo ohloselwe wena.
Okuyinhloko yezinsuku eziyisithupha. Bakhetha ukuthi ikusasa lakho lizokhula kanjani. Uma ngalesi sikhathi ukwazi ukuthola ingxenye bese uthintana naye, ngalolu suku uzozizwa ukuthi ulindele lo muntu.
Usuku lweshumi nanye lwenyanga, ikakhulukazi elikhanyayo. Ngalesi sikhathi, umsebenzi wezocansi uqala ukubheka i-outlet bese ushaya isihluthulelo, ngakho-ke ulungele kusengaphambili ngesidlo sokuchitha isikhathi esiphezulu.
Ngosuku lweshumi neshumi nesikhombisa umuntu kufanele athathe izinqumo ezinkulu futhi aqale ibhizinisi elibi. Kulolu suku ukuthi imishado idlalwa kakhulu. Uma ude kude nalokhu - ubuhlobo bungathuthela ezingeni elijulile.
Usuku lwamashumi amabili nanye lwenyanga - qala ukubonisa umsebenzi kanye nesithakazelo maqondana nomuntu ongenandaba nawe. Kulolu suku, noma yimuphi umzamo wokuba usondelene nento yokudumisa kwawo ihlelwe impumelelo.
Uyazi manje ukuthi yiziphi izinsuku zokubonisa umsebenzi ukuze ukhule usondele ekufinyeleleni umgomo wakho, futhi ukuthi yiziphi izinhlobo zamanga ezansi futhi ongahambisani, ukuze ungalimazi ukuthi kwenzekani. Ngosuku lwesishiyagalolunye, lweshumi nesishiyagalombili, lweshumi nesishiyagalolunye, neshumi nesishiyagalolunye nesishiyagalolunye nesishiyagalolunye nesithupha nesithupha, gwema abantu abajwayele ukuzithokozisa nokuzilibazisa, ngoba akukho isithembiso senkanyezi enhle.
Uma ufuna ukuthola uthando lwakho lweqiniso, kuzodingeka ushintshe impilo yakho. Ngakho qala ukukwenza nenyanga entsha. Yenza izinguquko ngokubukeka, ushintshe izinwele zakho, izimonyo, uthenge izingubo ezintsha futhi mhlawumbe -shintsha isitayela. Zikhethe ukudla futhi ulahlekelwe lawo amakhilogremu engeziwe abenza uzizwe ujabule ngempela. Noma uhlele idili elingenasidlo, uma ulinganisa kakhulu futhi uphawula konke - uthando olungathandeki. Ungakhohlwa - awukwenzi lokhu okwenziwe ngaphambili, ukuze uziqaphele wena, kodwa wena ngokwakho, ukungena empilweni entsha evuselelwe futhi uqale kusuka eqabeni elisha.
Indlela yokwenza ukuze umfana wangaphambili elele ngemuva kwendodakazi
Inkukhu ngesiFilipino nge-ananas
Ama-eggplant abiziwe nge-ricotta
Ikhalenda lembewu ngoJanuwari 2017: Izinsuku ezithandekayo zokuhlwanyela utamatisi ngezinsizakalo zenyanga kanye nendawo yokulima engadini
Amathoyizi okuqala kaKhisimusi enezandla zakho
Ama-bhisikidi "ama-knots aseNorway"
U-Prokhor Chaliapin nomsolwa u-Anna Kalashnikova uLarissa Copenkin wobuthakathi
Indlela yokuthuthukisa isimo sengqondo namandla
Ukwakheka okuhlala njalo: umdwebo wamashiya
I-skating rink eMoscow: ukuphika, ukuvuleka, ukumbozwa kanye nokuhlwa ebusuku eMoscow 2016